The Voice (USA) - ဝီကီပီးဒီးယား
ယင်း၏မြန်မာဗားရှင်း အတွက် The Voice Myanmar ကို ကြည့်ပါ။
ဧပြီ ၂၆၊ ၂၀၁၁ (၂၀၁၁-၀၄-၂၆) – present
ဤ ဆောင်းပါး တွင် The Voice (American TV series) (en.wikipedia) မှ ဘာသာပြန်ထားမှုများ ပါဝင်သည်။
The Voice အား NBC ထုတ်လွှင့်ထားတဲ့အမေရိကန်သီချင်းဆိုပြိုင်ဆိုင်မှုရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဧပြီလ 26, 2011 တွင်နွေဦးရုပ်မြင်သံကြားသံသရာစဉ်အတွင်းပြသဖို့နှင့်ဟော်လန်၏မူလ The Voice အပေါ်အခြေခံပြီးစက်တင်ဘာလ 10, 2012 ရက်တွင်တတိယရာသီပရီးမီးယားလိဂ်နှင့်အတူကျဆုံးသံသရာသို့တိုးချဲ့နှင့်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါသည် The Voice ဂိမ်း၏တစိတ်တပိုင်း တဆယ်ခြောက်ရာသီနှင့်အများပြည်သူစာရင်းစစ်ကနေရေးဆွဲအဆိုတော်တွေအယောင်ဆောင်နေဖြင့်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် (ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အပျော်တမ်းတစ်ကိုယ်တော်သို့မဟုတ် Duet) သည်လက်ရှိတွင်လက်မှတ်မထိုးသီချင်းဆိုခွက်တဆယ်, ကျော်အသက် 13 သို့မဟုတျ, ရှာတွေ့ရည်ရွယ်သည်။
အဆိုပါဆုရှင်တယ်လီဖုန်း, အင်တာနက်, SMS စာသား, နှင့်အသံ-မှတ်တမ်းတင်ထားသောအနုပညာရှင် အသံဖျော်ဖြေပွဲ၏ iTunes Store ကဝယ်ယူမှုအားဖြင့်မဲပေးရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ သူတို့ကအမေရိကန် $ 100,000 နှင့်ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ရဘို့ Universal Music Group နဲ့စံချိန်တင်သဘောတူညီမှုရရှိကြသည်။ အဆိုပါတဆယ်ခြောက်ရာသီ၏ဆုရရှိသူပါပြီ: က Javier Colon, Jermaine ပေါလုသည် Cassadee ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး, ဒန်ယဲလ် Bradbery, Tessanne ချင်း, Josh Kaufman, Craig ဝိန်းဘှိုငျဒျ, Sawyer Frederick, ဂျော်ဒန် Smith က Alisan ပေါ်တာ Sundance ဌာနမှူး, ခရစ်အပြာရောင်, Chloe Kohanski, Brynn Cartelli, Chevel သိုးထိန်းနှင့် Maelyn Jarmon ။
ဒတ်ခ်ျတစ်ခုလိုက်လျောညီထွေ The Voice of Holland ပြအား NBC ဒီဇင်ဘာလ 2010 ခုနှစ်တွင်ဘွဲ့နာမတော် "The Voice of America" အောက်မှာပြပွဲထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်; ၎င်း၏အမည်ကိုမကြာခင် The Voice မှကိုတိုစေခဲ့သည်။ (အမည် "Voice of America" က၎င်း၏ရေခြားမြေခြားရေဒီယိုဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အမေရိကန်အစိုးရကအသုံးပြုပြီးသားဖြစ်ခဲ့သည်။ ) တစ်ဦးချင်းစီရာသီထဲမှာ, ဆုရှင်က Universal သမ္မတနိုင်ငံမှတ်တမ်း (ရာသီ 1 & 2) သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း Universal Music Group နဲ့ $ 100,000 နှင့်စံချိန်တင်စာချုပ်အားလက်ခံတွေ့ဆုံ (ရာသီ 3-ပစ္စုပ္ပန်) ။
မူရင်းနည်းပြအဖွဲ့အားလုံးဂီတစက်မှုလုပ်ငန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နှင့်သော Blake Shelton, Adam Levine, CeeLo Green နှင့် Christina Aguilera ၏ပါဝင်သည်။ Shelton ဆက်တိုက်ပထမဦးဆုံးရာသီကျော်လွန်သည့်နည်းပြအဖွဲ့သည်၌ နေ. ရှိသည်ဟုဖို့သာတရားသူကြီးဖြစ်တော်မူ၏ Aguilera နှင့် Green တို့ကို Shakira နှင့် Usher ဖြင့်အစားထိုးခံရရန်ဦးဆောင်ရာသီ3ပြီးနောက်အနားယူလိုက်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ About 'The Voice'။ NBC။ June 1, 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ June 8, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ How to Audition for 'The Voice'။ NBC။ June 15, 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ May 17, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NBC Teams With Leading Reality Show Pioneers John de Mol & Mark Burnett and Warner Horizon Television to Bring 'The Voice of America' – Based on Holland's New Blockbuster Vocal Talent Discovery Show – to American Viewers (December 13, 2010)။ April 2, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "NBC's New Singing Competition Series 'The Voice' (Working Title) Announces Open Auditions in Cities Across America in 2011" (Press release). NBCUniversal. December 17, 2010. Archived from the original on October 19, 2013. Retrieved April 2, 2011. Unknown parameter |url-status= ignored (help)
↑ Ng၊ Philiana။ "Cee Lo Green, Maroon 5's Adam Levine Join NBC's 'The Voice'"၊ The Hollywood Reporter၊ February 28, 2011။ April 2, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hibberd, James (March 2, 2011). Official: Christina Aguilera joins NBC's 'The Voice'. Entertainment Weekly. Retrieved April 2, 2011.
↑ Ng၊ Philiana။ "Blake Shelton Joins NBC's 'The Voice' as Fourth Judge"၊ The Hollywood Reporter၊ March 7, 2011။ April 2, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Prudom၊ Laura။ "'The Voice' Shake-Up: Find Out Who's Replacing Christina & Cee Lo Next Season"၊ Huffington Post၊ September 17, 2012။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Voice_(USA)&oldid=484966" မှ ရယူရန်
Enဘာသာစကားမှ ဘာသာပြန်ထားပြီး ရှင်းလင်းရန် လိုအပ်သော ဝီကီပီးဒီးယား ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၃:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။